“खुसीको खबर” ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिस भर्ती हुन चाहनेहरुका लागि राम्रो आवसर !!! – Sapana Sanjal
June 3, 2021 106
Sapana Sanjal : बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिसका भर्तीका निम्ति अनलाइनबाटै प्रारम्भिक चरणको नाम लेखाउने (रजिस्ट्रेसन) भएको छ । त्यसनिम्ति जुन २८ देखि जुलाई १६ सम्म म्याद राखेको छ । १९ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर ननाघेकाले मात्र भिड्न पाउने रेक्रुट इन्टेक–२०२२ को मापदण्डमा राखिएको छ ।
Prevआज बिहिवार ह्वात्तै बढ्यो सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
Nextहिमालिभागका जनताका लागि काल बन्दै यार्सागुम्बा !!!